Intshayelelo kumgaqo wokuvelisa kunye nokusetyenziswa kwefilimu ye-Iridescent
Ifilimu ye-Iridescent yinto entsha, enobugcisa obuphezulu bokuhombisa izinto zeplastiki. Isixhobo semveliso esinobude obungaphezulu kweemitha ezingama-20 ngokucothayo sitsalela amasuntswana eplastiki acwecwe, kwaye kwelinye icala kuza umqulu wefilimu emibalabala yomnyama. Sebenzisa umgaqo wokungenelela kokukhanya ...
Ukunyathela okushushu kunye nenkqubo yokubanda ebandayo
Itekhnoloji yangoku yokunyathela yahlulwe yatshiswa isitampu eshushu kunye nokubanda. Itekhnoloji yokunyathela eshushu ibhekisa kukuhambisa i-foil kumhlaba we-substrate ngokufudumeza kunye nokucinezela i-foil ngesinyithi esikhethekileyo sokunyathela isitampu; Itekhnoloji yokunyathela ebandayo ibhekisa kwindlela yokusebenzisa ...
Yintoni enokuzisa ifilimu yefestile yeDichroic kuwe
YENZA KAKUPHELEKELE UKUFANELELA UKUFANELELA Iifilimu zefestile zeDichroic zidibanisa ubuhle, ukukhanya okuqaqambileyo kunye nombala ngetekhnoloji engaqhelekanga ukwenza isisombululo esahlukileyo, esifikelelekayo kwimigangatho yangaphakathi yeglasi. Imiboniso bhanyabhanya etshintsha umbala iyenziwa nge pre ...